प्रधानमन्त्रीज्यु मलाई दुई झापड लगाइदिनुस कान्ति अस्पतालको बिजोग हेर्दा आँसु आएन भने: रबि « Swadesh Nepal
प्रधानमन्त्रीज्यु मलाई दुई झापड लगाइदिनुस कान्ति अस्पतालको बिजोग हेर्दा आँसु आएन भने: रबि
प्रकाशित मिति : २१ असार २०७६, शनिबार
‘मुलुक परिवर्तन हुनका लागि प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता फेरिनुपर्छ’
हाम्रो कार्यक्रमले आज आफ्नो प्रशारणको चार सय भाग पूरा गरेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले कार्यक्रम मार्फत के ग¥यौ के गरेनौ भनेर चर्चा गर्न चाहन्न । एउटा निजी टेलिभिजनको ३०–४० मिनेटको कार्यक्रमले यो समाजको स्वरुप नै बदल्न के सक्थ्यो र !
तर हो राज्यको नजर नपरेको, उपेक्षित, गरिबी वा अन्य कारणले आवाज विहीन बनाइएका आम नागरिकको आवाजलाई चाँही कानको जाली फुट्ने गरी घन्कायौं । आज चार सय भाग मनाउँदै गर्दा यति कुरामा चाँही गर्व गर्न छुट हाम्रो टिमलाई प्रदान गरिदिनुहोला ।
यात्रा अझै लामो छ, अझ फराकिलो पार्नु पनि छ । हामीले अझै खारिनु छ, सिक्नु छ, जान्नु छ, बुझ्नु छ र पढ्नु छ । त्यसैले यो कार्यक्रम र यसका प्रस्तुति पत्रकारिताका उत्कृष्ट उदाहरण होइनन् । यो समाजले प्रथामिकता नदिएर छुटाएका व्यक्ति र विषयहरुको प्रतिनिधित्व गर्दा हुनसक्छ हामीले अन्जानमा पत्रकारिताको धर्म आदर्शको पनि मान मर्दन ग¥यौं होला ।
प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने क्रममा चार सय भागसम्मको यात्रालाई हेर्दा हामीले ढंग नपु¥याएका ठाउँहरु प्रसस्तै रहेछन् । आगामी दिनमा त्यस्ता कमजोरीहरुबाट पाठ सिक्ने प्रण गर्दछौं । मन न हो, मनमनै लाग्छ यो पनि गरौं । उ पनि गरौं । तर, हरेक व्यक्ति वा समूहको निश्चित क्षमता हुन्छ ।
हामी मध्ये कोही पनि असीमित क्षमताले भरिएका छैनौं । आम जीवनका साना–साना विषयलाई उठाउँदै सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने यो सिलसिला त कायम नै रहन्छ । तर, आज कार्यक्रम निर्माणको क्रममा देशका कुना–काप्चा र परदेशका झिलिमिली शहरहरुमा पुग्दा हामीले अनुभव गरेका केही महत्वपूर्ण बिषय बारे चर्चा गर्न चाहान्छु ।
एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमले मुलुक फेरिदैन । मुलुक फेरिनलाई सरकार प्रमुखका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता फेरिनुपर्छ । आज हामी आँफूले देखेका प्राथमिकता बारे देशका प्रधानमन्त्री ज्यूलाई उडाएर वा ब्यंग्य गरेर होइन जिम्मेवार हुदै सम्मान पूर्वक केही भन्न चाहन्छौ ।
हामीले गर्न नसक्ने तर तपाईले १ चुट्कीमा गर्नसक्ने विषयहरुमा ध्यानार्कषण गराउछु आफ्नै स्टाइलमा । प्रधानमन्त्री ज्यू ! देशका समस्याहरु ठुला छन्, त्यसैले तपाइले चाल्ने पाइला पनि ठुला–ठुला चाहिन्छन् । यो कानून बनाउने बर्ष हो भन्नु भएको छ । एउटा कानून बनाइदिनुस दलिय आधारमा गरिने पद बाँडफाडलाई यो देशको अस्तित्व रहेसम्म गर्न नपाइने कानून बनाइदिनुस् ।
योग्य मानिसहरुले तपाईको सारा सपना पूरा गरिदिनेछन् र तपाईलाई अझै एक्स्ट्रा सपना देख्न चुनौति नै दिनेछन् । तपाईको सपना साकार पार्ने मान्छे तपाइकै दल समर्थक मात्र हुन सक्छन् र ?
विपक्षी दल वा स्वतन्त्र मानिसहरुलाई स्थान दिनुहोस् । बोर्ड, संस्थान, निगम, कर्पोरेशनहरुमा विपक्षी दलले सिफारिस गरेका व्यत्तिहरुलाई प्रमुख बनाउनुस् । आफ्ना दलकालाई पेल्न र कारवाही गरेर निकाल्न दबाब पर्छ तर विपक्षी दलको सिफारिसमा राखेका प्रमुखलाई काम गराउन सजिलो हुन्छ ।
विपक्षी दलकाले घुस खाए सरकारको भन्दा बढी विपक्षको बदनाम हुन्छ । चुस्त प्रशासन र प्रभावकारी कामको लागि यो अचुक फर्मुला हो । कति ओटा देशमा त विपक्षी दलका नेतालाई मन्त्रीनै बनाइएको उदाहरण पनि छ ।
त्यत्रो जेलनेल खाएर ज्यानको बाजी लगाएर यहाँ पुगेका मान्छे जाबो एउटा राजदुतको पदमा भागबन्डा मिलाएर बस्ने भान्से जस्तो भएर हूँन्छ ? सीधै कुरा गरौं, अस्ती भर्खरै कांग्रेसबाट नेकपामा गएका एक जनालाई अष्टे«लिया जस्तो देशको राजदुतमा सिफारिस गरिएछ ।
सिंगो देशमा अष्टे«लियाका लागि राजदुत हुन योग्य व्यक्ति उहाँ महामहिम नै हो त ? तपाइकै नेकपाभित्र भएका कयौ क्षमतावानहरुको अपमान होइन यो ? नाकाबन्दीमा अडान लिएको मान्छे एउटा राजदुतको पदमा फतक्कै गल्नु हुन्छ भने दुरगामी बिषयमा कसरी टिक्नु होला ?
ब्यंग्य होइन चिन्ता गरेको हुँ । त्यो जैरे आइफा अर्वाड गरेरै छोड्छु भन्नुभएछ । सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू, यो देशका कर्णधार स–साना बालबालिकाहरुको उपचार हुने कान्ति बाल अस्पताल तपाई बस्ने घर भन्दा ५ मिनेटको दुरीमा छ ।
एक दिन एक घण्टाको लागि तपाई र म कान्ति अस्पताल जाऊ, तपाईको आँखामा आँसु आएनछ भने मलाई दुई झापड लगाइदिनु होला । म कान्ति अस्पताल दुई महिनाभित्र उत्कृष्ठ बनाएरै छाड्छु भनेर भनिदिनुस् त, तपाईको अडान यस्ता बिषयमा चाहिएको छ ।
हामी जस्ता भारेभुरे त चन्दा उठाएर दुर्गममा अस्पताल बनाउने आँट गर्दछौं, तपाई त देशको प्रधानमन्त्री ! सरकारी अस्पतालको यो हालत बनाएर कुन रेल कुदाउने ? जाने त हामी पनि चन्द्रमामा नै हो, मंगलग्रहमै हो तर, आफ्नै नेतृत्वमा पहिला त्यो कान्ति अस्पताल एउटा ठीक नगरी नछाड्ने अडान लिइदिनुस न प्लिज ।
कुरा प्राथमिकताको हो र अस्पताल विद्यालय हाम्रा प्राथमिकता हुन् । राम्रो स्कुल पढ्न पाएकोले नै तपाई यति जान्ने हुनुभो । देशका सरकारी विद्यालयको हालत देख्नुभएकै छ । काठमाडौको एउटा गल्लीमा चार जना मिलेर चलाएको बोर्डिङ स्कुलले आफ्ना प्राय सवै विद्यार्थीलाई एक लेबलमा स्मार्ट बनाउँछ ।
गाँउ–गाँउका केटा–केटी कस्तो स्कुलमा जान्छन् ? कस्तो कपडा लगाउँछन् ? कुन स्तरको शिक्षा पाउँछन् देख्नुभएकै होला । यो देशको शिक्षा मन्त्रालय, तपाईका शिक्षामन्त्री के गर्नुहुन्छ थाहा छैन तर एउटा कुरा ठोकुवा गरेर भन्छु् । देशै भरीका सरकारी विद्यालयहरुका भवनहरु सुपर–डुपर राम्रा बनाऔं ।
हर कोठामा एसी, हरेक विद्यार्थीलाई पाँच जोर नयाँ डे«स ६–६ महिनामा दिउ । फ्रीमा स्वस्थ खानाको परिकारै परिकार होस् र स्वाद यस्तो होस् कि तीन गाँउ बास्ना आओस । दिनमा ३ पटक खान पाउने घर जाँदा होम प्याक समेत लान पाउने व्यवस्था गराँै ।
छोराछोरी स्कुल पठाउने बाबुआमालाई सारी चोलो, लबेदा सुरवाल, झमझम इष्टाकोट प्रदान गरौँ । स्कुल भवन, मैदान यस्तो होस कि हेलिकप्टरबाट हेर्दा सबै भन्दा सुन्दर देखिने भवन स्कुल होस ।
यति भएपछि स्कुल नजाने को ? नपढाउने को ? अनि शिक्षा यस्तो दिउ कि काठमाडौंका युलियन्स, सेन्ट जेभिर्यस, सेन्टमेरिज, लिटिल एन्जल्स, जेम्स, रातो बंगला जस्ता स्कुलहरुका शिक्षकहरु मध्यबाट अडिसन लिएर बेस्ट भन्दा बेस्ट निस्किने लेबलका टिचरहरुलाई ती स्कुलले दिने भन्दा तीन गुणा बढी तलब दिएर गाँउ–गाँउ पठाआँै ।
यो देशमा सबैभन्दा बढी तलब खाने नै शिक्षकहरु होउन । अनि मात्र यो देशले एक सा एक क्षमतावान नागरिक उत्पादन गर्छ । ग्यारेन्टी दिन्छु प्रधानमनत्री ज्यू, यसरी आएका विद्यार्थीबाट राजनीति गर्नेहरु तपाई भन्दा १० गुणा राम्रा नेता बन्नेछन् र म भन्दा त सय गुणा राम्रा सञ्चारकर्मी बन्नेछन् ।
अर्को कुरा विकास निर्माणको । एउटा सहसचिव वा सचिव गए पुग्ने विदेशी सम्मेलनमा तपाई गएर पैसा भन्दा पनि समय नास भयो । यो देशको ठेक्का पट्टाको हालत के छ ? किन असारमा मात्रै काम हुन्छ ? बनेका बाटाहरु किन बर्षदिन टिक्दैनन् ? देशभरका ठेकेदारहरुलाई बोलाएर ७ दिनको सेमिनार गर्नुस न, निर्माण व्यवसायीहरुको मर्का र समस्या सुन्न ७ दिन पनि थोरै हुन्छ ।
त्यो युरोप घुमेर के नै हात लाग्यो र ? वरिपरिकाले घुम्न पाए फोटो हाल्न पाए, प्लेन चड्न पाए, सक्कियो । अनि एउटा २० किलोमिटर बाटो बन्न ५ बर्ष लाग्छ भने त्यसको कारण पनि त केही होला नी । कन्ट्रक्सन सेमिनार भयो भने यसको कारण पत्ता लाग्छ ।
ठेकेदारलाई सरापेर अमूल्य बर्षहरु फिर्ता आउँदैनन् । एउटाको ठेक्का बाटोमा पिच गर्ने, एउटाको डे«न बनाउने, अर्को फुटपाथ बनाउने फेरि अर्को धारो हाल्ने, ढल हाल्ने अर्को अनि एउटा बन्दा अर्को बिग्रिसक्छ । पिच गर्नेले पिच सकेर के गर्नेु ? फुटपाथ बनाउनेको कन्ट्याक्ट शुरु भएकै हुन्न त्यसपछि साइडबाट पिच उप्किन्छ ।
यति जाबो कुरा बुझ्न मन्त्री बन्नु पर्छ र ? यी सब प्राथमिकताका कुरा हुन । भ्यु टावल यो देशका प्राथमिक्ता हुन् त ? हे मेरा प्रिय आदरणीय प्रधानमन्त्री ज्यू, ८ हजार मिटर भन्दा अग्ला हिमालनै ८ वटा भएको यो देशमा भ्यु टावरहरु विकासका मापक होइनन् ।
अनि अख्तियार र न्यायालयमा समेत दलको भागबन्डाको दल दलमा तपाईहरु जस्तो राजीतिज्ञहरुले ज्यानको पर्वाह नगरी ल्याएको लोकतन्त्र नफसोस । दलिय युनियन र राजनीतिक भागबण्डा यो मुलुकको विकासमा बिष सावित हुँदैछन् ।
यत्ति एउटा कारणले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल जस्ता घगडान नेता यो मुलुकको प्रमुख निर्णयकर्ता हुदाँ पनि जनतामा उत्साह छाएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार गर्ने कानून बनाएर, दलिय भागबण्डा, दलिय युनियनको डरलाग्दो जालो, अनि राजनीतिक कोटामा हुने नियुक्तिबाट यो मुलुकलाई सदाका लागि छुटकारा दिने व्यवस्था तपाईले मिलाइदिनुभयो भने अर्को पुस्ताले यो मुलुकलाई बेग्लै उचाई दिने छन् ।
प्रधानमन्त्रीले हाँसीमजाक, नोकझोक गर्नै नहुने त होइन तर रिसानी माफहोस् प्रधानमन्त्री ज्यू, हामी आफ्नो देशको सरकार प्रमुखका अभिव्यत्तिहरु कम्तिमा पनि स्कुल कलेजका क्यान्टीनमा गरिने हल्का हाँसी मजाक भन्दा कयौं माथि उठेको हेर्न चाहन्छौं ।
४ सय भागसम्म आइपुग्दा हामीले यस कार्यक्रम मार्फत मुलुकको सरकारलाई सघाउने कोशिस गरेका छाँै । जिम्मेवारी पूर्वक खबरदारी गर्ने यो सिलसिला निरन्तर चल्ने छ । आम सञ्चार माध्यम आम मानिसका लागि उपयोगी बनाउने हाम्रो प्रयासमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका लाखौ दर्शकहरुको साथ मिलेको छ ।
सीमित स्रोत साधन बाट असीमित सफलता त के मिल्ला र ? तर राज्यका निकायहरुलाई झकझकाउन हामीले आफ्नो आवाजलाई हल्का चर्काे बनाएकै हौं । यसले धेरैको निन्द्रा कच्मचिएको महशुस गरेका छौ । त्यसरी निन्द्र कचमचिएर रन्थनिएकाहरुबाट सुरक्षा लगायका चुनौतिहरुको सामना हामी प्रत्येक दिन गरिरहेका छौ ।
कयौ खराब मानिसहरुको धम्कीको आतंक मात्र होइन बर्दी लगाएकाहरुकै लात्ता पनि छात्तीमा थापेर पनि रिपोर्टिङ नछाड्ने देशै भरीका आफ्ना टिमका निडर, निर्भिक, साहसी, इमान्दार र स्वाभिमानी टिभी जर्नलिष्टहरुलाई सलाम गर्दै अनवरत साथका लागि तपाई दर्शकहरुलाई कोटी–कोटी धन्यावाद दिन चाहन्छु । बाटो नबिराई माटोको सेवा गर्नेछांैं, यसमा कहिल्यै तल माथि हुने छैन् । नेभर एभर ।
चार सय भाग पूरा
न्युज २४ टेलिभिजनबाट प्रशारण भैरहेको लोकप्रिय कार्यक्रम सीधाकुरा जनतासँगले शनिबार ४ सय श्रृङखला पूरा गरेको छ । जनताको चासो गुनासो र प्रश्नलाई एकै ठाँउमा राखेर सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास स्वरुपमा २०७३ मंसिर २८ गतेबाट कार्यक्रम प्रशारण आरम्भ गरेको थियो ।
हरेक साताको (मंगलबार) विहीबार र शनिबार राति ८.४५ मा प्रशारण हुने कार्यक्रम टेलिभिजनमा लाइभका साथै युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक हेरिने समाचार बिषेश कार्यक्रम अन्तरगत पर्छ ।
४ सय श्रृङखलासम्मको यात्रा
कार्यक्रमको सुरुवात दिनदेखि नै सटकमा परेका खाल्डा–खुल्डी, बस्तीमा पिउने पानी अभावदेखि स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव, ठूला अस्पतालमै गुणस्तरीय उपचार अभाव भएका रिर्पोटहरु प्रशारण गरेको छ ।
साथै सर्वसाधारण प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारीले अनेक वहानामा घुस लिने प्रवृतिलाई स्टीङ अपरेशन गरेर सप्रमाण टेलिभिजनमा प्रशारण गरेको छ ।
यस बाहेक विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीम जाने नेपालीहरुलाई एजेन्ट, मेनपवार, कन्सल्ट्यान्सीहरुले चर्को सेवा शुल्क लिने, भनेजस्तो काम र दाम नदिने साथै विभिन्न शिर्षकमा ठग्नेलाई करावाहीको दायरामा ल्याउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ ।
रोजगारीको खोजीमा नेपालबाट श्रम अनुमति नै नभएका देशमा पुगेको नेपाली महिलाहरु समस्यामा परेपछि सहयोगका लागि सम्झिने टेलिभिजन बनाउन कार्यक्रमले धेरै नेपाली महिलाहरुलाई उद्धार र सहयोग गरेको छ ।
कार्यक्रमबाटै देश विदेशमा रहेको दर्शकहरुको सहयोगमा सप्तरीका ५२ मुसहर परिवारका लागि वातावरण अनुकुल घर निमार्ण गरेको छ, भने शिक्षा स्वास्थ्यका पुर्वाधारबाट बञ्चीत कर्णालीको कालीकोटामा रास्कोट सामुदायिक अस्पताल निमार्ण सुरु गरेको छ ।
साथै कार्यक्रमले धेरै व्यक्तिका बिषयमा आवाज उठाएपछि आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरेको छ ।
आलोचना र प्रतिकृया
कार्यक्रममा प्रसारित हरेक विषयमा दर्शकको उच्च चासो हुने गरको छ । कहिलेकाँही केही बिषयमा दर्शकहरुबाट सिर्जनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिकृया आउने गरेका छन् । जसकारण कार्यक्रमलाई थप खोजमूलक, अनुसन्धानात्मक बनाउन टेवा पुग्ने भएकाले आलोचनालाई हामीले सकरात्मक रुपमा लिएका छाँै ।
४ सय श्रृङखला बिषेश
शनिबार प्रशारण हुने लागेको कार्यक्रममा यस अघिका कार्यक्रमको समीक्षा हुनेछ । साथै कार्यक्रमबाट नयाँ जीवन पाएका केही दर्शकहरु सीधाकुरा जनतासँगको स्टुडियोमा नै प्रत्यक्ष उपस्थित भएर आफ्ना अनुभव बाँड्ने छन् ।
कार्यक्रमलाई यो अवस्थामा पु¥याउन सहयोग गर्ने सम्पुर्ण दर्शकप्रति कार्यक्रम तथा न्युज२४ टेलिभिजन परिवार धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।